पीडित’ले बयान फेर्दा पनि किन छुटेनन् पल शाह ? यस्तो रैछ कारण ! – Ramailo Sandesh
पीडित’ले बयान फेर्दा पनि किन छुटेनन् पल शाह ? यस्तो रैछ कारण !
June 5, 20220Comments
२२ जेठ, काठमाडौं ।
उच्च अदालत पोखराले नाबालिगमाथि जबरजस्ती करणीको आरोप लागेका नेपाली चलचित्रका नायक पल शाहलाई थुनामै राख्न आदेश दिएसँगै उनी तत्काल रिहा हुने सम्भावना सकिएको छ । गएको बिहीबार न्यायाधीश उज्वल शुक्ला र श्रीधराकुमारी पुडासैनीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत तनहुँको आदेशलाई सदर गरेको हो ।
यसअघि, जिल्ला अदालत तनहुँले उनलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो । पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पलका वकिलले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।
अब जिल्ला अदालतले फैसला नगरी उनी रिहा हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने छैन । बलात्कारको आरोप लगाएकी किशोरी र उनका बुवाले अदालतमा बयान फेरेपछि पलले उच्च अदालतबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने धेरैको अनुमान थियो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय तनहुँका न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्मा अब जिल्ला अदालतको फैसला कुर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, “हाम्रो दाबी त अहिले पनि दोषी नै भन्ने हो । अब अदालतले के गर्छ त्यो कुर्नुपर्छ । केही साक्षीहरूको बयान अझै बाँकी छ ।”
शर्माका अनुसार पुर्पक्षका लागि जेल चलान भए पनि यति समयभित्रै मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने भन्ने बाध्यकारी कानुन छैन । उनले भने, “सामान्यतया मुद्दा चलेको एक वर्षभित्र सकाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, यही नै भनेर कतै छैन ।”
कतिपय कानुन व्यावसायी पीडितले बयान फेरे पनि सजाय हुन सक्ने बताउँछन् । अभियुक्तलाई दोषी प्रमाणित गर्न परिस्थितिजन्य प्रमाण, घटनामा जोडिएका व्यक्तिको बयानलगायत पनि घटनालाई पुष्टि गर्ने अधार हुन सक्ने सम्भावना रहने कानुन व्यावसायीहरू बताउँछन् ।
पलविरुद्ध प्राविधिक प्रमाण पनि प्रहरीले जुटाएको थियो । प्रहरी अधिकारीहरू पललाई दोषी सावित गर्न प्रमाण पर्याप्त रहेको दाबी गर्छन् ।
१७ वर्षीया किशोरीका बुवाले म्युजिक भिडियो छायांकनका क्रममा पलले बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै गएको फागुन ११ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा जाहेरी दिएका थिए । जाहेरी दर्तापछि पल फागुन १५ मा आफैँ प्रहरीको सम्पर्कमा पुगेका थिए ।
फागुन १६ मा फेरि पूर्वी नवलपरासीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय गैँडाकोटमा पीडित भनिएकी किशोरीले आफूमाथि पलले बलात्कार गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् ।
पत्थरी छ ? उसो भए पत्थरीबाट जोगिनको लागि गर्नुस् यी ७ काम ……
तनहुँ बाट भर्खरै आयाे यस्ताे दु:खद खबर,
राजधानीमा भइरहेको धन्दाको पर्दाफाश, ७ महिलासहित १४ जना पक्राउ
चितवनबाट गोरखाको भच्चेक गइरहेको बस दुर्घटना
अण्डा फुटाउने बित्तिकै यो रङ देखिए सावधान हुनुहोस्, बिरामी पार्ने जोखिम
घट्यो सुनको मूल्य, यस्तो छ बजार भाउ
यस्ता छन् १० कारण केटाहरूले ‘आन्टी टाइप’का महिलाहरू मन पराउँनु….